Wordplanet: Dadka isticmaalkii dabiiciga ah ee naagta. ROOMA
ROOMAL - Cutub 2
1Sidaas daraaddeed, nin yahow, marmarsiinyo ma lihid ku kastoo aad tahayba kaaga wax xukuma; maxaa yeelay, meeshii aad ku kale ku xukuntid, waad isku xukumaysaa, waayo, kaaga wax xukumaa, waxaad samaysaa isla wixii.
ROOMAL - Cutub 3
ROOMAL - Cutub 4
1Haddaba maxaynu nidhaahnaa inuu helay Ibraahim oo awowgeennii hore ahaa xagga jidhka?
ROOMAL - Cutub 9
ROOMAL - Cutub 10
1Walaalayaalow, waxaan qalbigayga ka doonayaa oo Ilaah ka baryaa inay iyagu badbaadaan.
ROOMAL - Cutub 12
1Haddaba, walaalayaalow, waxaan idinku baryayaa Ilaah naxariistiisa inaad jidhkiinna Ilaah u siisaan sida allabari nool oo quduus ah oo Ilaah ku farxo, waana cibaadaysigiinna caqliga leh.
ROOMAL - Cutub 14
ROOMAL - Cutub 15
ROOMAL - Cutub 16